Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanafoanana ny otrikaretina COVID-19 miaraka amin'ny Air Ionizers Vaovao
Tamin'ny volana Mey 2021, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny singa aerosolized ho fomba fifindran'ny COVID-19. Ny fihanaky ny otrikaretina avo kokoa amin'ny variana delta dia midika ihany koa fa ny toerana anaty trano miaraka amin'ny fikorianan'ny rivotra ratsy dia miteraka risika be amin'ny fihanaky ny COVID-19 satria mety hijanona ela eny amin'ny rivotra ny poti-virosy entin'ny rivotra.
Teo aloha avy amin'ny fandalinana ny fahombiazan'ny fanesorana aerosol navoaka tao amin'ny lahatsoratra fikarohana OSF (Artikelin'ny OSF Research 2021) tamin'ny fiandohan'ny taona 2021, ny zavamaniry Zero2.5 sy ny ionizer voajanahary mifototra amin'ny fibre voajanahary dia naseho fa manala tanteraka ny 95% amin'ny aerosol an'habakabaka mandritra ny 25 minitra (tsy misy tsy misy). ionizer) ao anatin'ny 7 minitra ao amin'ny efitrano 20 m3 tototry ny aerosol 4,000 isaky ny cm3. Izany dia mitovy amin'ny fananana ACH ("fiovan'ny rivotra isan'ora") avo indrindra 12 sy CADR ("tahan'ny fanaterana rivotra madio") 141 ft3 isa-minitra.
Na izany aza, rehefa nanomboka nahita fitsanganana indray ny isan'ny tranga COVID-19 avy amin'ny variana delta ny firenena, Zero2.5 dia nanafaingana ihany koa ny ezaka mba hahazoana fanamarinana tsy miankina amin'ny fiarovam-piarovana izay omen'ireo mpanadio rivotra fibre voajanahary ho an'ny COVID-19.
Tamin'ny Novambra 2021, ny ekipa ao amin'ny Zero2.5 dia faly mizara fa ny valin'ny fitsapana mahaleo tena momba ny fiarovana ny viriosy dia nivoaka tamin'ny farany taorian'ny dingana fanamarinana maharitra sy henjana nataon'i Texcell. Texcell dia fikambanana fikarohana fifanarahana eran-tany naorina tamin'ny 1987 izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitiliana otrikaretina, fanadiovana virosy ary biosafety.
Texcell dia nanao fanadihadiana momba ny fanadiovana viriosy, izay matetika ampiasaina amin'ny indostria hamaritana ny fahombiazan'ny dingana iray amin'ny fampiatoana ny viriosy amin'ny fampitahana ny totalin'ny viriosy tamin'ny voalohany tamin'ny habetsahan'ny viriosy tavela taorian'ny dingana antiviral.
Ny fitsapana dia nahitana ny Zero2.5's Natural Fiber Coco Coir Air Ionizer CF4000 ary hita fa 99.998% ny otrik'aretina Sars-Cov-2 dia tsy niasa tao anatin'ny 3 ora tao anaty boaty 57 litatra - maneho ny fihenan'ny log 4.77. Ohatra, ny fampihenana lozisialy amin'ny 1 dia mitovy amin'ny fampihenana in-10, raha ny fampihenana ny 2 dia mitovy amin'ny fihenan'ny in-100. Ny fampihenana ny lozisialy 4 na mihoatra dia heverina ho tena mahomby amin'ny fenitry ny indostria amin'ny fampihenana ny viriosy. Nasehon'ny fitsapana fanaraha-maso fa raha tsy misy ionizer an'ny rivotra Zero2.5, 99.999% ny otrik'aretina dia mbola velona afaka 3 ora.
Ao anatin'ny drafitra fanokafana indray an'i Singapore mankany amin'ny ara-dalàna vaovao, ny ionizera rivotra mifototra amin'ny fibre voajanahary - ankehitriny miaraka amin'ny fanamarinana ara-tsiansa mahaleo tena amin'ny fanafoanana ny viriosy COVID-19 - dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana amin'ny faritra misy fifamoivoizana be olona.
Tsy ampy ny fametrahana mpanadio rivotra mahazatra satria matetika ny aretina dia mitranga amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny fotoana tena izy. Misy varavarankelin'ny vulnerable eo anelanelan'ny fotoana ateraky ny aerosol viriosy avy amin'ny olona voan'ny areti-mifindra sy ny fotoana voasivana ny rivotra amin'ny alàlan'ny mpanadio rivotra ara-barotra. Mitombo be ny risika amin'ireo fifindran'ny kilaometatra farany ireo any amin'ny faritra be olona.
Ny Zero2.5's Natural Fiber Air Ionizer dia manalefaka io risika io amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fifantohan'ny viriosy amin'ny fotoana tena akaiky ny loharano. Ny fifantohana avo amin'ny Ion Air Negative (NAIs) avoakan'ny ionizera voajanahary mifototra amin'ny fibre eto akaikin'ny loharanon'ny viriosy dia manome sehatra fiarovana 360 degre, toy ny bubble sivana rivotra izay mampihena ny viriosy mba hiarovana ny mpampiasa ao anatiny. Fanampin'izay, araka ny nohamarinin'ny Texcell, ny fahafahan'ny Zero2.5 Ioniser manafoana ny asan'ny viriosy dia manampy amin'ny fanalefahana na fampihenana izay mety ho voan'ny aretina.
Ny fitantanana ny risika fifindran'ny kilaometatra farany amin'ny faritra be fifamoivoizana dia ho zava-dehibe, satria mianatra miaina miaraka amin'ny COVID-19 ny toekarena. Ny fiarovana amin'ny fotoana tena izy amin'ny viriosy mivantana nomen'ny ionizera mifototra amin'ny fibre voajanahary Zero2.5 dia azo apetraka amin'ireo faritra mampidi-doza ireo mba hampihenana ny vanim-potoanan'ny otrikaretina amin'ny alàlan'ny fampitsaharana ny viriosy eo akaikin'ny loharano.